China Monoblock Control Valve SD5 Soosaarka iyo Warshadaha | Junbao
Fudud, compact iyo culus culus naqshadaynta unugyada monoblock ka 1 si ay u 6 qaybood oo loogu talagalay nidaamyada xarunta hydraulic furan oo xiran. ◆ Lagu rakibay tuubada dulsaarka cadaadiska ugu weyn iyo tuubada hubinta culeyska. ◆ Waxaa lagu heli karaa barbarro isbarbar socda, taxane ah ama tandem. Power Awood ikhtiyaar ah oo ka baxsan dekedda (oo keliya barbar-barbar ama tan-tandem). Eter Dhexroor 16 mm - 0.63 ah murugo isweydaarsaneysa. Options Ikhtiyaarrado waaweyn oo ikhtiyaarrada dekeda deyn kaladuwan U Hawshu waa buug-gacmeed, oof-wareen, koronto-baraare, hawo-haye, aaladda korantada, ...
Fudud, compact iyo culus culus naqshadaynta unugyada monoblock ka 1 si ay u 6 qaybood oo loogu talagalay nidaamyada xarunta hydraulic furan oo xiran.
◆Waxay kuxiran tahay tuunbooyinka cadaadiska cadaadiska ugu weyn iyo tuubada baaridda culeyska.
◆Waxaa lagu heli karaa barbarro isbarbar socda, taxane ah ama wareejin wareeg ah.
◆Awood ikhtiyaar ah oo ka baxsan dekeda (oo keliya barbar-barbar ama tandem).
◆Dhexroor 16 mm - 0.63 gudaha murugo isweydaarsan.
◆Ikhtiyaarrado waaweyn oo ikhtiyaarrada dekeda deyn kaladuwan ah.
◆Hawshu waa buug-gacmeed, oof-wareenka, elektiroonigga-pneumatic, hydraulic, electro-hydraulic, oo leh keli-gacmeed iyo fog oo leh xirmooyin xakameysan oo xirmooyinka xakameeya.
SD5 Taxanaha Tilmaamaha Kantaroolka Monoblock
9 / 16- 18 (SAE 6)
Model Sd5 Xogta Xogta
Hore: Monoblock Control Valve P80
Xiga: Monoblock Control Valve SD11